Wararkii ugu dambeeyay askarta lagu la’yahay Xeebaha Magaalada Marka - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Wararkii ugu dambeeyay askarta lagu la’yahay Xeebaha Magaalada Marka
October 21, 2019 at 16:08 Wararkii ugu dambeeyay askarta lagu la’yahay Xeebaha Magaalada Marka2019-10-21T16:08:35+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Waxaa weli Xeebaha Magaalada Marka ka soconaya gurmadka lagu doonayo in lagu soo samata bixiyo afar ka mid ah Ciidanka guutada 14-ka October, oo lagu la’yahay xeebahaasi.
Askartan ayaa ka mid ahayd toddobo iyo toban askari oo la socday dooni ka tagtey Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday Magaalada Marka, balse intii aanay gaarin Magaalada Marka ay doonidoodii kula qalibmatay badda.
Saddex iyo tobanka askari ee soo badbaaday ayaa waxaa ku jira G/dhexe Axmed Cabdi Cali (Axmed Gaashaan), Taliyaha Guutada 14-ka October.
Ciidankan oo xalay ka tagey Magaalada Muqdisho ayaa saanad hub ah u siday Ciidamada Dowladda Somaliya ee ku sugan Magaalada Marka.
Cabdifitaax Xaaji Cabdulle, Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Maaliyadda ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay inaan nolol iyo geeri midna lagu hayn askarta maqan, xilli sida uu sheegay uu socdo gurmad ballaaran oo lagu baadi-goobayo.
Gudoomiye Kuxigeenka oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA ayaa ku waramaya inaanan weli laga quusan askarta laga baadi-goobayo Xeebaha Gobolka Shabellaha Hoose.
Gudoomiyaha Degmada Marka, Cabdullaahi Axmed Cali (Waafow) oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa isna xaqiijiyay in illaa iyo hadda u socdo gurmadka.
Shilka ku yimid doonida ayaa waxaa loo maleynaya in uu ka dhashay roob xoogan oo xalay ka da’ay Gobolada Banaadir & Shabellaha Hoose.
Ciidankan ayaa qorsheynayay in safar dhinaca badda ay ku taggaan Magaalada Marka, sababo ku aadan iyagoo ka cararaya qaraxyada iyo weerarada jid galka ay Shabaabka la beegsadaan gaadiidka ay ciidamada la socdaan.
« Carles Puyol Oo Ka Hadlay In Virgil Van Dijk Uu Abaal Marinta Ballon D’or Kula Tartamayo Messi & Ronaldo.
Ceel-Baraf: Askari Dilay Wiil Dhalinyaro Ah »